Tsvangirai: Zimbabwe opposition leader has cancer of the colon - World - Pulse.ng
Tsvangirai : Zimbabwe opposition leader has cancer of the colon
Tsvangirai Zimbabwe opposition leader has cancer of the colon
Zimbabwe&apos;s main opposition leader and President Robert Mugabe&apos;s chief rival for the last 17 years said on Tuesday he has been diagnosed with cancer of the colon and is undergoing treatment in neighbouring South Africa.
Morgan Tsvangirai, 64, who was Zimbabwe&apos;s prime minister in an uneasy coalition government with the 92-year-old Mugabe from 2009 until 2013, said it was important for national leaders to disclose their health status.
Tsvangirai, who lost the 2013 presidential vote against Mugabe, has since 1999 led the Movement for Democratic Change (MDC) but the party has, however, been weakened by splits over how to confront Mugabe&apos;s ZANU-PF.
The MDC, evicted from the unity government after its crushing defeat in the 2013 election, is split over whether to dump Tsvangirai before the next vote in 2018. Critics say he has often been outsmarted by Mugabe, Africa&apos;s oldest leader.
Robert Mugabe Stay out of succession talk, Zimbabwe's President tells liberation veterans
Robert Mugabe Zimbabwe's President will not pick successor, wants to live to 100
Robert Mugabe Zimbabwe's President says government will take over all diamond operations
Robert Mugabe Zimbabwe presidency dismisses president's heart attack rumour
In Zimbabwe "Sweet business" of beekeeping helps protect country forests